चीनको शंकास्पद ल्याबसँग अमेरिकी कनेक्सन भेटियो, के कोरोना फैलाउन अमेरिकाको हात छ ? – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/चीनको शंकास्पद ल्याबसँग अमेरिकी कनेक्सन भेटियो, के कोरोना फैलाउन अमेरिकाको हात छ ?
काठमाडौं। कोरोनाभाइरस सबैभन्दा पहिले चीनको वुहान शहरबाट फैलिएको मानिएको छ । यो भाइरस जंगली जनावरबाट मानिसमा फैलिएको बताइएको छ । यस्ता भाइरस चमेरामा पाइने भएकोले सम्भवतः यो भाइरस पनि चमेरोबाटै फैलिएको अनुमान गरिएको छ । यही बीचमा चीनको एक प्रयोगशालामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । यो प्रयोगशाला चीनको जंगली जनावरको बजार नजिकै भएका कारण यो ल्याबमाथि प्रश्न उठेको थियो ।
यो ल्याब निकै सुविधासम्पन्न र उन्नत छ । यो ल्याब यस किसिमका भाइरसको विषयमा अनुसन्धान गर्ने चीनकै सबैभन्दा ठूलो ल्याब पनि हो । अब यो शंकास्पद ल्याबमा अमेरिकाको पनि सम्बन्ध भएको खुलासा भएको छ । बेलायती पत्रिका डेलिमेलले आफ्नो रिपोर्टमा यो ल्याबलाई अमेरिका सरकारले ३.७ मिलियन डलर दिएको केही दस्तावेजबाट खुलासा भएको दावी गरेको छ । यो ल्याबमा भाइरसहरुमा विभिन्न प्रयोग हुने गरेको बताइएको छ । यो खुलासाले अमेरिकाका कैयौं नेताहरु पनि चकित परेको रिपोर्टमा बताइएको छ ।
रिपोर्टमा यो ल्याब अर्थात वुहान भाइरोलोजी इन्स्टिच्युटमा चमेरोमा कुनै प्रयोग गर्ने क्रममा यो भाइरस लिक भएको र मानिसमा फैलिएको तर पछि चीनले यो भाइरस जनावरबाट मानिसमा फैलिएको बताएको हुन सक्ने दावी गरिएको छ । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको इमरजेन्सी कमिटी कोबराका सदस्यले पनि ल्याबबाट भाइरस फैलिएको थ्योरीलाई विश्वास गर्न लायक भनेका छन् ।
अमेरिकी नेताहरुले आफ्नो देशको तर्फबाट चिनियाँ ल्याबलाई फण्ड दिइएको विषयमा बडा आपत्ति जनाएका छन् । केही अमेरिकी नेताहरुले जनावरहरुमा गरिने खतरनाक र हिंस्रक प्रयोगको लागि यो फण्ड दिइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । अमेरिकाको नेशनल इन्ष्टिच्युट अफ हेल्थको तर्फबाट वुहान भाइरोलोजी इन्ष्टिच्युटलाई यो रकम दिइएको थियो ।